Ahoana ny fametrahana an'i Bandicam hanoratra lalao
Ahoana no hanesorana mozika amin'ny iPhone amin'ny iTunes
Sambany vao niasa tao amin'ny iTunes, ny mpampiasa dia manana olana isan-karazany mifandraika amin'ny fampiasana fepetra sasany amin'ity programa ity. Amin'ny ankapobeny, androany dia hijery akaiky ny fanontaniana mikasika ny fomba hahafahanao mamafa hira avy amin'ny iPhone ianao amin'ny fampiasana iTunes. iTunes dia fampahalalam-baovao mahazatra izay ny tanjony dia ny mitantana ny fitaovana Apple amin'ny solosaina.
Ahoana no hanaisotra playlists amin'ny iTunes
Ho an'ny fahafahana mikarakara mozika amin'ny fitaovana samihafa Apple, mifantina làlam-pandrefesana mifanaraka amin'ny fihetseham-ponao na karazan'asa, iTunes dia manana fepetra fananganana lahatsary izay mamela anao hamorona rakitsary misy mozika na horonan-tsarimihetsika izay ahafahanao mampifanitsy ireo rakitra ao amin'ny playlist ary anontanio azy ireo ny baiko nilaina.
Ahoana ny famindrana sary avy amin'ny iPhone, iPod na iPad ho an'ny solosaina
ITunes dia fampahalalam-baovao malaza ho an'ny ordinatera mampiasa Windows sy Mac OS, izay matetika ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ny fitaovana Apple. Androany dia hijery fomba iray handefasana sary avy amin'ny fitaovana Apple ho an'ny ordinatera. Amin'ny ankapobeny, iTunes for Windows dia ampiasaina hitantana ireo fitaovana Apple.
Fomba hanamboarana hadisoana 21 amin'ny iTunes
Mpisera maro no nahare momba ny kalitaon'ny vokatra Apple, na izany aza, iTunes dia iray amin'ireo karazana fandaharana izay saika ny mpampiasa rehetra no miasa, miatrika fahadisoana amin'ny asa. Ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fomba hanafoanana ny fahadisoana 21. Ny tranga 21, araka ny fitsipika, dia miseho noho ny tsy fahampian'ny fiasan'ny fitaovana Apple.
IPhone tsy azo averina amin'ny alalan'ny iTunes: fomba hamahana ny olana
Amin'ny ankapobeny, iTunes dia ampiasaina amin'ny solosaina ataon'ny mpampiasa mba hitantana ny fitaovana Apple, ohatra, mba hanatanterahana ny fizotran'ny fanarenana. Androany isika dia hijery ny fomba lehibe hamahana ny olana rehefa tsy naverina tamin'ny iTunes ny iPhone, iPod na iPad. Mety misy antony maromaro mahatonga ny tsy fahafahana hamerina aparitaka Apple ao amin'ny solosaina iray, manomboka amin'ny version of version iTunes tsy mety ary farany amin'ny olana momba ny fiarovana.
Ahoana ny fametrahana ny fampiharana iPhone amin'ny alalan'ny iTunes
Ireo fitaovana IOS dia mendri-piderana, alohan'ny zava-drehetra, amin'ny fifantenana ny lalao sy ny fampiharana avo lenta, ny ankamaroan'izy ireo dia tsy misy afa-tsy amin'io sehatra io. Androany isika dia mijery ny fomba fametrahana fampiharana amin'ny iPhone, iPod na iPad amin'ny iTunes. ITunes dia programa malaza amin'ny ordinatera izay ahafahanao mandamina asa amin'ny ordinatera miaraka amin'ny fitaovam-pitaovan'ny Apple ao amin'ny fitaovana.
Ahoana no hamafa ireo sary avy amin'ny iPhone, iPad na iPod amin'ny iTunes
ITunes dia fitaovana iray amin'ny fitantanana ireo fitaovana Apple amin'ny solosaina. Amin'ny alalan'ity programa ity dia afaka miara-miasa amin'ireo rakitra rehetra ao amin'ny fitaovana ianao. Amin'ny ankapobeny, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hijery ny fomba ahafahanao mamafa sary avy amin'ny iPhone, iPad na iPod Touch amin'ny iTunes.
Famotehana ny fahadisoana 54 amin'ny iTunes
Ny olana isan-karazany ao amin'ny rafitra dia miteraka fahadisoana izay miteraka fahadisoana. Manana karazana fahadisoana i ITunes, saingy sombiny, ny hadisoana tsirairay dia manana ny code manokana, izay mahatonga azy io ho mora kokoa amin'ny famahana ilay olana. Raha ny tena izy, ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fahadisoana iray amin'ny code 54.
Fomba hamahana ny fahadisoana 1671
Ao anatin'ny dingan'ny fiasana miaraka amin'ny iTunes, maro ireo mpampiasa dia mety mahita fahadisoana isan-karazany indraindray, ary ny tsirairay aminy dia manaraka ny fehezan-dalàna manokana. Noho izany, androany isika dia hiresaka momba ny fomba famahana ny fahadisoana amin'ny code 1671. Ny lozam-pifamoivoizana 1671 dia mitranga raha misy olana eo amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny fitaovana sy iTunes.
Fomba hanatsarana ny tsy fahombiazan'ny 2009 amin'ny iTunes
Na tiantsika izany na tsia, isika dia mahita fahadisoana isan-karazany rehefa miasa miaraka amin'ny iTunes. Ny fahadisoana rehetra, araka ny fitsipika, dia manaraka ny laharan-tarehiny tokana, izay ahafahana manatsotra ny olana amin'ny famonoana azy. Ity lahatsoratra ity dia hifanakalaza ny code code diso 2009 rehefa miasa miaraka amin'ny iTunes.
Fomba hanamboarana diso 3014 amin'ny iTunes
ITunes dia fampahalalam-baovao mahazatra ampiasaina hiasa amin'ny fitaovana Apple ao amin'ny ordinatera. Indrisy anefa fa tsy ny asa rehetra amin'ity programa ity dia mety ho satroboninahitra amin'ny fahombiazana raha misy hadisoana misy mari-pamantarana manokana hita eo amin'ny efijery. Ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fomba hamahana ny fahadisoana 3014 amin'ny iTunes.
Ahoana no hanaisorana mozika amin'ny iTunes
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, iTunes dia ampiasaina hanangonana mozika izay azo ekena amin'ny programa, ary koa kopia amin'ny fitaovana Apple (iPhone, iPod, iPad, sns.). Androany dia hijery ny fomba ahafahanao manala mozika fanampiny avy amin'ity program ity. ITunes dia vondrona samihafa izay azo ampiasaina amin'ny mpilalao media, mamela anao hividy ao amin'ny iTunes Store ary mazava ho azy, ny sync apple gadgets amin'ny solosainao.
Fahadisoana "Nifanindran-dàlana teo anoloan'ny iTunes configuration" ny installer rehefa manangana iTunes
Isika amin'ny tranokalantsika dia efa nodinihina ny hadisoana marobe samihafa nitranga tamin'ny fampiasana iTunes. Androany dia hiresaka olana hafa izahay, raha tsy mampiasa ny iTunes amin'ny mpampiasa ny mpampiasa noho ny fahadisoana pop-up "Ny fandrakofana dia hita fa diso eo anoloan'ny configuration iTunes".
Ahoana ny fisorohana ny fahadisoana 9 rehefa miasa miaraka amin'ny iTunes
Amin'ny dingan'ny fampiasana iTunes amin'ny ordinatera iray dia mety misy fahadisoana isan-karazany ny mpampiasa izay manasarotra ny hamita ilay asa. Amin'izao andro iainantsika izao dia hitoetra amin'ny fahadisoana isika amin'ny code 9, dia ny handinika ny fomba lehibe ahafahantsika manafoana izany. Raha ny fitsipika, ny mpampiasa ny apple gadgets dia mifanohitra amin'ny code 9 rehefa manavao na mamerina ny fitaovana Apple.
Fomba famahana ny fahadisoana 4005 amin'ny iTunes
Tahaka ny programa hafa ho an'ny Windows, iTunes dia tsy voaro amin'ny olana isan-karazany amin'ny asa. Amin'ny ankapobeny, ny olana tsirairay dia miaraka amin'ny hadisoana miaraka amin'ny fehezanteny tokana tokana, izay mahatonga azy io ho mora kokoa hamantarana izany. Ahoana no hanafoanana ny fahadisoana 4005 amin'ny iTunes, vakio ilay lahatsoratra. Ny fahadisoana 4005 dia matetika hita ao amin'ny dingan'ny fanavaozana na famerenana ny fitaovana Apple.
Ny iTunes dia tsy mahita ny iPhone: ny tena antony mahatonga ny olana
Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mampiasa iTunes hanapatapaka ny fitaovana Apple miaraka amin'ny solosaina. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka hamaly ny fanontaniana mikasika ny tokony hatao raha tsy mahita ny iPhone ny iTunes. Ankehitriny dia hijery ny antony lehibe indrindra isika satria tsy misy iTunes mahita ny fitaovana misy anao.
Ahoana ny fomba hanamboarana iPhone, iPad na iPod amin'ny iTunes
Raha misy olana eo amin'ny sehatry ny fitaovana Apple na mba hanamboarana azy io, iTunes dia ampiasaina hanatanterahana ny fomba famerenana amin'ny laoniny izay ahafahanao manavao ny fikirakirana eo amin'ny fitaovana, ka mahatonga ny fitaovana ho madio toy ny rehefa mividy. Mba hianarana ny fomba hamerenana ny iPad sy ny fitaovana Apple hafa amin'ny iTunes, vakio ny lahatsoratra.
Ahoana ny fandikana ny fahadisoana 2003 ao iTunes
Ny fahadisoana rehefa miara-miasa amin'ny iTunes dia tena mahazatra ary, ndao lazaina, tranga tsy mahafinaritra. Na izany aza, ny fahafantarana ny fehezan-teny diso, dia azonao atao ny mamantatra kokoa ny anton'ny fisehoany, ary noho izany dia andramo haingana izany. Androany dia hiresaka momba ny fahadisoana iray amin'ny code 2003. Misy diso amin'ny code 2003 dia hita ao amin'ny mpisera iTunes rehefa misy olana amin'ny fampifandraisana USB ny solosainao.
Ahoana ny fanavaozana iTunes amin'ny solosainao
Mazava ho azy fa misy rindrambaiko amin'ny fotoana rehetra mandray ny fanavaozana tsy maintsy alamina. Amin'ny fijery voalohany, aorian'ny fanavaozana ny fandaharana, dia tsy misy fiovana, fa ny fanavaozana tsirairay dia manolotra fiovana lehibe: ny fanakatonana ny lavaka, ny fanatsarana, ny fampitomboana ny fanatsarana, izay toa tsy mahagaga ny maso.
Ahoana no hamahana ny iTunes diso amin'ny iTunes Library.itl
Amin'ny ankapobeny, olana maro amin'ny asan'ny iTunes no vahaolana amin'ny famerenana tanteraka ny fandaharana. Na izany aza dia hisy ny toe-javatra amin'izao fotoana izao raha toa ka tsy azo vakiana ao amin'ny efijery mpampiasa ny fahadisoana "iTunes Library.itl File" ao amin'ny mpisera rehefa nanomboka iTunes, satria noforonina tamin'ny iTunes vaovao izy io.
https://termotools.com mg.termotools.com © ITunes 2019